Qeybta Warshadaha - Soosaarayaasha Qeybta Shiinaha, Alaab-qeybiyeyaal
Laba-maddiibadood oo Sink / a
Hal Biibiile oo keliya / a
Gacanta Lagu Sameeyo Hal Weel HM7646
Labo fijaan oo aan lahayn Guddi ...
Laba Salaadood oo aan lahayn Guddi ...
Guluubka birta aan xirnayn: JW-01
Sharaxaadda alaabta: Sameynta quraac midab leh, qado si wanaagsan loo diyaariyey ama qado kalgacal leh adoo kaligaa ah, la fadhiista qoyskaaga iyo asxaabtaada oo aad la sheekeysanaysid, nolosha waxaa lagu sifeeyey muuqaallada noocaas ah, taas oo dadka ka dhigaysa inay ku raaxaystaan. Meel jikada diiran oo diiran, saxanka wax ku oolka ah ee jilicsan waa inuu noqdaa shay lagama maarmaan ah. Waxay abuurtaa jawi jikada oo jilicsan, oo runtii raaxo leh. Lahaanshaha qubeyska tayada sare leh waa dareen farxad leh oo qalbigayaga ah, dabeecad la safeeyey oo xarrago leh ...
Xarkaha birta birta ah: JW-02
Sharaxaadda alaabta: Sameynta quraac midab leh, qado si wanaagsan loo diyaariyey ama qado kalgacal leh adoo kaligaa ah, la fadhiista qoyskaaga iyo asxaabtaada oo aad la sheekeysanaysid, nolosha waxaa lagu sifeeyey muuqaallada noocaas ah, taas oo dadka ka dhigaysa inay ku raaxaystaan. Meel jikada diiran oo diiran, saxanka wax ku oolka ah ee jilicsan waa inuu noqdaa shay lagama maarmaan ah. Waxay abuurtaa jawi jilicsan oo jilicsan, runti waa wax lagu farxo.
Guluubka birta aan xirnayn: JW-03
Qeybta birta ahama: JW-04
Jikada jikada waa qeyb muhiim ka ah gurigaaga nolol maalmeedka. Weelka xamuulka ah wuxuu ka samaysan yahay bir koronto oo aan kala joogsi lahayn (SS201 ama SS304) oo loogu talagalay adkaysi u adkaysiga miridhku. Cod nuugid khalkhal yar design Naqshad balaaran oo balaaran oo adiga kugu habboon inspection Baadhitaan tayo leh oo adag ka hor dhalmada iyo qaabab badan oo aad u xulato xulashadaada. Adeegsiga Badeecada washing U maydhista qalabka jikada iyo weelka. Washing Dhaqida iyo diyaarinta cuntada. Tilmaamaha wax soo saarka ● Ha tuurin wixii kiimiko ah oo xun. Cle Ha nadiifin ...
Qeybta birta ahama: JW-05
Qeybta birta ahama: JW-06
Guluubka birta aan xirnayn: JW-07
Qeybta birta ahama: JW-08